Akụkọ - Jinyun County's 33rd Youth and Children's Music Competition Awards Gala
Jinyun County si 33rd Ntorobịa na'smụaka Asọmpi Asọmpi Awards Gala
Na mgbede nke Disemba 23, nke Jinyun County Education Bureau, nke Kọmitii Ndị Ntorobịa nke Kọmunist Jinyun County, na Jinyun County Youth Work Committee, County Youth Activity Center (Red Scarf College) na County Musicians Association kwadoro 33rd " Golden Stick Cup "Ntorobịa ntorobịa The enọ ọzọ maka asọmpi e ọma ẹkenịmde ke Jinyun Beauty School. Na nnọkọ oriri na ọ partyụ ofụ ahụ, ndị isi ise kachasị ọkwa na ọkwa ọ bụla nyere onyinye na saịtị.
Dika ikpo okwu di nkpa iji kwalite mmepe nke ndi ntorobịa na ndi umuaka nke umuaka, emere Jinyun County Youth and Children Music Competition maka oge 33. Site n’isiokwu nke “Iketa Red Gene na Stgbalị comebụ Ezi Nwa na Oge Ọhụrụ”, asọmpi nke afọ a mepụtara ndị mmeri 1,490 na ngalaba nke ọ bụla site na mbido ụlọ akwụkwọ na mmechi saịtị. Onu ogugu ndi soro na otu asọmpi ahụ bụ nke kachasị na akụkọ ntolite.
Ndị otu ihe nrita ahụ bidoro site na ngwa egwu "Beijing Tune". Mgbe nke ahụ gasịrị, ọrụ dị iche iche na arụmọrụ dị elu pụtara na ebe ahụ. Pii solo "Ambush on Ten Sides", Wu Opera na-abụ abụ "West Lake Rescue Sister", "Lin Chong Qijie", obere chorus "Ajali Girl of the Great Liangshan", egwu egwu "Silent Grassland", mkpokọta agba egwú "Youthgba Egwuregwu Ndị Ntorobịa" na mmemme ndị ọzọ niile bụ ndị kiriri gosiputara oriri ọhụụ.